12/03/2016 – Gentleman Magazine
သူမ လုံးဝမကြားဖူးလောက်သေးတဲ့ အလန်းစား ပုံစံများ ၁. The Sport Massage ပထမ ပုံမှန် Reverse Cowgirl Position နဲ့ စပါ။ ပြီးတော့ သူမ ရင်သားတွေကို သင့်ဒူးပေါ်မှာ နားနိုင်တဲ့အထိ ဒူးကို ကွေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဟာသင့်အတွက် သူမရဲ့ ပန်းနဲ့ ခရေအကြား
လူတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ သုံးတာလား ? လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်က ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အရေးကိစ္စပေါင်းများစွာကို လုပ်ဆောင်သလို တေးသီချင်းတွေ ရေးဖွဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ညီမျှချင်းတွေ ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်နိုင်စွမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အပြုအမူတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကိုသာမက မှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိဖို့ကိုပါ တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတွေရဲ့ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်က
ဝိုင်နီက သင့်နှလုံးအတွက် ကောင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်း အရက်ကြိုက်သူတွေဟာ ဆရာဝန်တွေက တစ်နေ့ကို ဝိုင်နီတစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်ဖို့ တရားဝင် ထောက်ခံလိုက်တဲ့ နေ့မှာ ဝိုင်းခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဝိုင်နီ ပုံမှန်သောက်တာဟာ သင့်နှလုံးသားအတွက် ကောင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့လဲ?? အဲဒိ မေးခွန်းဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ဦးနှောက်ခြောက်စေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရ
12/03/2016 12/03/2016 moezacgroup
သင့်စိတ်စွမ်းအားကို ဖွင့်လှစ်ပြသဖို့ နည်းလမ်း လေးသွယ် သင့်ဦးနှောက် စွမ်းရည်ပြည့် အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ သင်ကိုယ်တိုင်ပါ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို အစာကျွေးဖို့၊ လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး အဲလိုလုပ်ရင် သင့်ရဲ့ စိတ်ပါ စွမ်းအားမြင့်လာပါမယ်။ စိတ်စွမ်းအားကို အဆုံးထိ မြှင့်တင်ဖို့ဟာ သင်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အရမ်း အရေးပါပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုောတ့